काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले सरकारी गाडी भारतबाट तस्करीको सामान ओसार्न प्रयोग गरिएको खुलेको छ । सडक विभागले हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगञ्जका लागि उपलब्ध गराएको बा १ झ
काठमाडौं । सहपाठीले खाइरहेको विस्कुट खान दिने बहानामा ओखलढुङ्गाका शिक्षक सुजन सुनारले शिशु कक्षाका विद्यार्थीलाई जुत्ता चाट्न लगाएका छन् । चार वर्षका रिकेश नेपाली र आकाश दर्जीलाई सहपाठी जोन दर्जीको
पहिलोपटक महिनावारी भएकी रिनाले छाउगोठ बस्न मानिनन् तर जसरी पनि त्यहाँ गएर बस्नैपर्ने घरपरिवारको दबाब आएपछि उनले आमासँग रुदै भनिन् ,‘आमा ! म छाउघर जानै पन्र्या हो’ कतै उनीलाई आमाले
कसले लगायाे १५ सय गाडीकाे पाङ्ग्रामा ताल्चा ?
काठमाडौं । सडकमा जथाभावी राखिएका सवारीसाधनको पाङ्ग्रामा अकस्मात् ताल्चा लाग्ने गरेको छ । गाडी रोकेर बाहिर निस्केको केहिबेरमै पाङ्ग्रामा ताल्चा लागेपछि सवारीधनीलाई कसले यस्तो गर्यो ? भन्ने जिज्ञासा समेत हुने
बारम्बारको बिस्फोटले त्रास : सुरक्षा परिषद् बैठक बस्दै
काठमााडौं । मुलुकको शान्ति सुरक्षाका बारेमा समिक्षा र थप सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मजबुत बनाउने बिषयमा छलफल गर्न सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान साढे ११ बजेका लागि बैठक
काठमाडौंमा फेरि बम भेटियो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही समय यता बम बिस्फोटका घटना बढ्न थालेको छ । स्युचाटारमा आइतबार बिहान बम भेटिएको छ । सडकमा राखिएको बम निस्क्रिय पार्न बम बिस्पोजल टोली त्यसतर्फ
मिलमा सल बेरिँदा तड्पिएर बितिन् स्मृति
बाँके । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एक महिलाको मिलमा सल बेरिएर मृत्यु भएको छ । राप्तीसोनारी–६ सिधनवाकी २८ वर्षीया स्मृति थारूको मिलमा बेरिएर मृत्यु भएको हो । उनी शनिबार साँझ फत्तेपुरको सिधनवास्थित
धादिङ। गजुरीबाट १०५ किलोग्राम चरेससहित प्रहरीले आइतबार बिहान तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट वीरगञ्जतर्फ जान लागेको ना५ख २८१२ नम्बरको बसमा लुकाइछिपाई लान लागिएको अवस्थामा सो चरेस बरामद गरिएको
विद्यार्थीको रहस्यमय मृत्यु, कलेजद्वारा अभिभावकमाथि दुर्व्यवहार
काठमाडौं । सिरहा मिर्चैया नगरपालिका स्थायी घर भएका महेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो छोराको मृत्युको जिम्मेवारी काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले कलेजको लापरबाहीकै कारण छोराको
बम विस्फोटको जिम्मा विप्लवसमूहले लियो
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको शक्तिशाली विष्फोटको जिम्मा नेकपा विप्लव समूहले लिएको छ । शुक्रबार साँझ गुरुङको घरको ग्यारेजमा राखिएको गाडीमा शक्तिशाली विस्फोट भएको